Steel Waya eriri, Waya eriri Ngwa, rigging Hardware - Égbè Eluigwe
Elekwasị anya na ọgwa na mmepe, anyị na-ewu ezi mmekọrịta na ígwè factory, webbing èbè factory, pole ngọngọ factory, ibu binders factory na igwe anaghị agba nchara ngwaahịa factory, iji hụ na ndị dị iche iche mkpa nke anyị na ndị ahịa na kacha mma mma na asọmpi price.
20 afọ ahụmahụ
Anyị na rigging ụlọ ọrụ ruo afọ iri abụọ. Anyị bụ ndị ezigbo Nchikota stocking, sourcing, nkwakọ, uru kwukwara ọrụ. Inye quality eri irè ngwọta ahaziri gị onye mkpa.
"Quality mbụ, Ahịa mbụ", anyị hụ ọ bụla ngwaahịa rue nnyefe nnyocha. Anyị na-eme mgbalị nile iji nye elu àgwà na asọmpi price. Nchekwa gị bụ nchegbu anyị.
Linyi Égbè Eluigwe rigging CO., Ltd e hiwere na 1998, emi odude ke Linyi City, Shandong Province. Anyị factory na-pụrụ iche na akara nke rigging hardware, anyị na-enye dịgasị àmà nke ngwaahịa, dị ka waya eriri mkpachị, nkpọrọ olu, turnbuckles, nko, yiri mgbaaka, thimbles, aka uwe na otú on.Focus na ọgwa na mmepe, anyị na-ewu ezi mmekọrịta na nkpọrọ factory, webbing èbè factory, pole ngọngọ factory, ibu binders factory na igwe anaghị agba nchara ngwaahịa factory, iji hụ na ndị dị iche iche mkpa nke anyị na ndị ahịa na kacha mma mma na asọmpi price.
DIN741 waya eriri mkpachị
320C US Ụdị anya nko
US Type ịghasa Pin Anchor
otu na nko pole ngọngọ
tie ala ibu nragide 1500kg
TURNBUCKLES azụmahịa Ụdị
G80 alloy yinye
rigging Hardware , pole Block , Chain pole Block , eweli rigging Hardware , Long Link Chain , Chain Link,